shanduko dzakakosha dzakaitwa kune applecare + mushure mekuzivisa kwemhuri iphone 11
Kuru Nhau & Ongororo Shanduko dzakakosha dzakaitwa kuAppleCare + mushure mekuzivisa kwemhuri ye iPhone 11
Shanduko dzakakosha dzakaitwa kuAppleCare + mushure mekuzivisa kwemhuri ye iPhone 11
Kunyangwe pasina chinoshamisa 'chimwezve chinhu' chiziviso , Apple & apos; s yakasarudzika Gunyana 10 chiitiko chakamhanya kweanoda kusvika maawa maviri, iine akati wandei mahombe ekuparura Hardware, pamwe neinonakidza mitsva mitsva pane iyo kambani & apos; inotarisirwa kwazvo yemitambo chipeto uye mavhidhiyo ekuparadzira mapuratifomu . Asi kunyangwe 100+ jam-yakazara maminetsi anga asingakwanise kuisa kutarisisa pane shanduko diki diki dzese dzinoitwa kuCupertino & apos; dzakasiyana dzakasiyana zvigadzirwa zvigadzirwa uye mabasa anowedzera kubatsira.
Semuenzaniso, inozivikanwa AppleCare + chirongwa chakawedzerwa chewarandi chiri kuongorora kamwe kadiki asi kwakakosha maererano nemabatiro aungaite kubhadhara kufukidzwa kwako uye kwenguva yakareba sei, uku uchiwedzera kune chikamu chitsva chemidziyo. Kana iwe uchinge uchizvibvunza kuti vangani iPhone 11, 11 Pro, uye 11 Pro Max vatengi vangabhadhariswe nekuda kweichi chakakosha asi basa rekuzvisarudzira, isu tinogona ikozvino kugovana ruzivo irowo.
AppleCare + mitengo ye iPhone 11, iPhone 11 Pro, uye iPhone 11 Pro Max
Apple yakatora vanhu vazhinji nekushamisika ne kutanga mutengo weiyo 6.1-inch iPhone 11 , iyo inorongedza inokurumidza processor kupfuura gore rapfuura & apos; s iPhone XR, pamwe neyechipiri yakatarisana neshure kamera, ichicheka iyo yakatangira na50 mabhaketi pakuvhurwa. Nehurombo (uye zvinofungidzirwa zvakakwana), hapana zvinoshamisira maererano neAppleCare + mitengo, seiyo & apos; standard 'iPhone 11 ajoina iyo XR, 8 Plus, uye 7 Plus mune $ 149 kirabhu , nepo iyo 11 Pro uye 11 Pro Max yakawedzerwa kune iyo $ 199 boka padivi peiyo yakafanana yekumusoro-kuguma iPhone XS, XS Max, uye X mamodheru kubva kune apfuura makore apfuura.
Nehunyanzvi, Apple haisati yasimbisa mutengo wekuwedzera kuba uye kurasikirwa nedziviriro pamusoro pezvakakosha zveCare + mabhenefiti eiyo iPhone 11 nePro duo, asi isu tinogona kutarisira kuti zvienderane nevatatu & maapos; vatangiri pa $ 50 ne $ 100 premium zvichiteerana. Pazasi mutsara, iwe unofanirwa kunge uchisimudzira kubhadhara $ 299 yeiyo iPhone 11 Pro kana Pro Max uye $ 199 kusvika iyo iPhone 11 ine hanya kana iwe uchida iyo yose shebang. Izvo hazvibatanidze zvakabviswa, mufunge, izvo zvicharamba zvichitangira kubva kumadhora makumi maviri nemapfumbamwe ekukuvara kwescreen kusvika $ 269 ye iPhone 11 Pro uye Pro Max kuba kana kurasikirwa.
AppleCare + kubhadhara pamwedzi
Iwe unoziva iyo yemwedzi yekubhadhara sarudzo yakawedzerwa kuAppleCare + gore rapfuura rekusimudzira vatengi kuchinjika? Neimwe nzira, Cupertino ari kuita kuti inyatsochinja izvozvi, kunyange hazvo asiri munhu wese achizobvuma shanduko yatiri kutaura nezvayo pano yakanaka. Chaizvoizvo, iwe unogona ikozvino kusarudza pakati pekumberi kubhadharira chaiyo makore maviri ekuwedzeredzwa kufukidzwa uye inodzokororwa pamwedzi kubhadhara iyo iwe & apos; makasununguka kupera chero nguva.
Ndizvozvo & apos; ndizvozvo, unogona kuchengeta yako AppleCare + & apos; kunyorera 'kwe mwedzi mumwe chete kana kuwedzera zviri nyore kupfuura iyo yenguva yemwedzi makumi maviri nemana . Pakutanga kuona, izvo & apos; sa inogamuchirwa shanduko kune vanhu vari kutsvaga kuomerera kune avo maPhones, maPads, kana maApple Watches kwenguva yakareba kupfuura iyo 'yakajairika' yekukwirisa kutenderera, asi panguva imwe chete, uchifanira kumisa nemaoko ako AppleCare + kubhadhara zvinoreva kuti unogona kanganwa kuzviita kana iwe usisade sevhizheni zvakare.
Iwe & apos; iwe zvakare uchada kugara uchifunga iwe & apos; iwe uchange uchibhadhara zvakanyanya mukufamba kwenguva kana ukasarudza kunyorera pamwedzi. Semuenzaniso, makore maviri iPhone XR AppleCare + kufukidza kunodhura $ 149 kana iwe ukosora upfu hwese chaihwo, nepo makumi maviri nemana masendendi masendi emadhora 7.99 anokwana kusvika kuzere huwandu hunopfuura mazana zana emamiriyoni.
AppleCare + ye headphones
Tichifunga mukurumbira unoshamisa weiyo misika-inotungamira AirPods , & isinganzwisisike zvisinganzwisisike zvekuti zvakatora Apple kwenguva yakareba kuti iuye neyakavimbika yakapihwa sevhisi seyekutengesa zvakanyanya isina waya nzeve, pamwe neBeats EP, Beats Pro, Solo3, Studio3, BeatsX, Powerbeats Pro, uye Powerbeats3 .
Zvese izvi Apple-yakashambadzirwa kana maApple-akatengesa mahedhifoni anouya newaranti yakashomeka seyakajairwa kupa gore rimwe rekugadziriswa kwekugadzirisa Hardware, asi mukutsinhana chete $ 29, unogona ikozvino kuwedzera nguva iyoyo kusvika kumwedzi makumi maviri nemana, panguva iyo iyo kambani ichave neyako inodzokera inosvika kuzviitiko zviviri zvekukuvara netsaona, imwe neimwe yenyaya kune imwezve $ 29 yemari yebasa.
AppleCare + inowanikwa izvozvi padivi pekutenga kwako mahedhifoni ataurwa pamusoro kana mukati memazuva makumi matanhatu ekutenga mabhureki matsva kana magaba. Kunze kwemahedhifoni chaiwo, chirongwa ichi chinofukidza bhatiri ravo uye chaisanganisira USB yekuchaja tambo zvakare.
software yekuvandudza mainjiniya mukuyedza
AT & T inofambisa vanasekuru vane mukurumbira muzvirongwa zvemutengo unilaterally
Maitiro ekuwana clipboard yepasirese pamidziyo yako yese (iOS, Android, Windows PC)
Apple & apos; s inotevera iPhone inogona kusazonzi iPhone 9 ... Kana iPhone SE 2
Maitiro Ekutora Browser Network Traffic (XHR) neCypress
Yakanakisa Galaxy S20 madhiri ku Best Buy, Amazon, Verizon, T-Mobile nevamwe